नार्कोनन सफलताको भिडियो - रोबर्ट एच.
हाम्रो बारेमा नार्कोननले किन काम गर्छ प्रमाणपत्रहरू एल. रन हब्बर्ड
फोन गर्नुहोस् (877) 508-8151 अहिले सहयोग पाउनुहोस्
मेरी श्रीमती मादकपदार्थ र लागुऔषधको कुलतमा फसेको इतिहास छ। उनले अनौठो व्यवहार गर्न थालिन् यो प्रस्ट थियो – मैले उनलाई केही समस्या छ भन्ने सोचे। मैले धेरै पटक उनीसँगबाट केही चक्कीहरू पनि खोसे।
उनले पिएर बच्चाको जस्तो व्यवहार देखाउँथिन्। छोरी मेरी जेन सानै थिइन, एक दिन प्रहरीको फोन आयो। उनीहरूले मलाईं मेरी जेन तपाईंकी छोरी हो भनेर सोधे। सबै ठीक थिए तर उनी निकै नराम्रो कुलतमा थिइन। त्यो निकै खराब रात थियो।
अन्य रातहरू जस्तै थियो। त्यतिबेला हाम्रो जीवन सुरक्षित थिएन।
मेरी साली म्यागीले मलाईं नार्कोनन देखाउन ल्याएकी हुन्। उनले भनिन्, “तपाईंका बालबालिकालाई जीवित आमा चाहिन्छ।” उनको यही भनाइले मलाईं नार्कोनन आउन बाध्य गर्‍यो।
उनी नार्कोननबाट बाहिरको पहिलो क्रिसमस सबैभन्दा विशेष थियो यति मात्र होइन त्यतिबेला मैले निकै आराम महसुस गरे।
मैले उनलाई फिर्ता पाए। उनी पहिलेभन्दा फरक थिइन। आज मैले बिहे गरेकै बेलाकी केटी फिर्ता पाए जस्तै लाग्यो।
उनलाई नार्कोनन पठाउने निर्णय मैले गरेको जीवनकै राम्रो काम थियो, हाम्रो परिवार, मेरो विवाह र व्यक्तिगत सुखका लागि।
® नार्कोनन एरोहेड
नार्कोननको बारेमा विश्वव्यापी लक्ष्य ५० वर्ष देखि : लागुऔषध मुक्त जीवनको सेवामा समर्पित पहिचान र मुल्यांकन अध्ययन तथा रिपोर्टहरू एल. रन हब्बर्ड
थप जानकारी कार्यक्रम सूचना पोर्टफोलियो थप जानकारीको लागि अनुरोध गर्नुहोस् नार्कोननलाई सम्पर्क गर्नुहोस् सार्वजनिक सेवाको सन्देशहरू
© 2022 नार्कोनन एरोहेड . सर्वाधिकार सुरक्षित। • अनलाईन गोपनीयता सूचना • प्रयोग सर्तहरू • गोपनीयता अभ्यासहरूको सूचना • अस्वीकृति: व्यक्तिगत परिणामहरूको कुनै गारन्टी गरिएको छैन र यो व्यक्ति अनुसार भिन्न हुन सक्छ।